फिल्ममा खलनायक बनेर खेल्न मन छ : प्राडा सुवास आचार्य
२०७६ श्रावण १८ शनिबार १६:३५:०० प्रकाशित
प्राडा सुवास आचार्य त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आइसियु प्रमुखको रुपमा कार्यरत छन्। पेसाले चिकित्सक भएपनि उनी नाचगान, अभिनयमा पनि उत्तिकै रुचि राख्छन्। भर्खरै मात्र मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा अनिल बरालद्धारा रचित तथा स्वरुपराज आचार्यले गाएको गीत ‘अंगालै भरी’कोे म्यूजिक भिडियोमा उनले अभिनय गरेका छन्। यही सेरोफेरामा स्वास्थ्यखबरको जीवनशैली स्तम्भका लागि बुनु थारुले डा आचार्यसँग गरेको अभिनय वार्ताः
यो तपाईको पहिलो म्यूजिक भिडियो हो?
यो मेरो तेश्रो म्यूजिक भिडियो हो। यसअघि मैले सन् २००४ मा पहिलो म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरेको थिएँ। त्यो गीत ‘तिम्रो याद आउँछ हरपल’ भन्ने सुदेश खवासले गाउनुभएको थियो। त्यसैगरी ‘यस्तै रहेछ जिन्दगी’ बोलको लोचन रिजालको गीतमा पनि खेल्ने मौका पाएको थिएँ। त्यो थियो कुरा सन् २००५ को। त्यो गीतले त्यस वर्षको हिट्स एफएम रक संगको उपाधी पनि जित्न सफल भएको थियो।
म्यूजिक भिडियो खेल्छु भन्ने सोच कसरी आयो?
म सानैदेखि अतिरिक्त क्रियाकलापमा सक्रिय थिएँ। स्कुल तथा कलेजमा आयोजना हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन्थेँ। अस्पतालमा आयोजना गरिने हाम्रो कार्यक्रमहरुमा पनि आफ्नो प्रस्तुति देखाउने गरेको छुँ। मैले साल्सा, क्लासिकल डान्सहरु सिकेको छु। नाच्न मनपराउँछु। हल्का गुनगुनाउँछु पनि। साथै अभिनय पनि गर्न मन छ। म्यूजिक भिडियो खेल्नु मेरो एउटा शोखको विषय हो। आफ्नो शोख पूरा गर्नको लागि खेल्ने सोच बनाएको हो। म भन्छु आफ्नो शोख कहिल्यै मर्न दिनुहुन्न।
यो भिडियो खेल्ने सोच कसरी बन्यो?
मलाई म्यूजिक भिडियो खेल्ने इच्छा पहिला देखिको नै हो। करियरमा नै ध्यान दिएर आफ्नो इच्छालाई निरन्तरता दिन सकिएन। डा अनिल र म दुवै साथी हौँ। हामीले सँगै एमबिबिएस पढेका हौँ। डा अनिलले यसअघि पनि ‘एउटा खाता’ नामक गीत सार्वजनिक गरेका छन्। त्यो मलाई राम्रो लागेको थियो। एकदिन कुरा हुँदै जाँदा अनिललाई अर्को गीत लेख्दा मलाई सम्झिनु है भनेर भनेको थिएँ। मेरो इच्छा छ भनेर भनेको थिएँ। त्यसपछि खेलियो।
भिडियो खेल्दा कस्तो रमाइलो क्षणहरु याद आउँछ?
मैले भिडियो खेल्नुभन्दा पहिला निर्देशकसँग बसेर छलफल पनि गरेको थिएँ। कन्सेप्ट मनप¥यो। मेरो त प्रोफेसनल्ली पनि जथाभावी रोल खेल्न भएन। अलि राम्रो खालको पात्र निभाउनुपर्छ। त्यसैले पहिला बुझेर खेल्ने निर्णय गरेँ। म त प्रोफेसनल एक्टर होइन। क्यामरामा नर्भस हुन पुग्नेरहेछु। धेरैचोटी क्यामरामा हेर्दा नर्भसनेस पुरै देखिने। धेरैचोटी झुक्किएर क्यामरामा आँखा जान्थ्यो। सुरुमा चाहिँ बिहानको सटहरु खिच्न मलाई समय लाग्यो तर पछि सहज हुँदै गएँ।
मैले यस गीतमा अभिनेत्री बेनिसा हमालसँग अभिनय गरेको छुँ। उहाँले मलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो। १ दिन १ रातमा सुटिङ सिद्धिएको थियो।
श्रीमतीले यसमा कत्तिको सहयोग पुर्‍याउनु भयो?
खासमा मलाई श्रीमतीले नै हौस्याएको हो। डा अनिल र डा सन्ध्या सँगै वीर अस्पतालमा काम गर्ने हुनाले छलफल त पहिला उहाँहरुको नै भएको रहेछ। उसको यसमा साथ सहयोग छ।
म्यूजिक भिडियोबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ?
साथीभाइबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छु। राम्रै काम गरेको जस्तो लाग्छ। हुन त चिनेकाले त नराम्रो भन्ने कुरा हुँदैन। मुख्य कुरा मलाई नचिन्ने दर्शकहरुले राम्रो भनिदिए त्यसमा मलाई निकै सन्तोष मिल्ने थियो।
त्यसो भए भविष्यमा तपाईलाई फिल्ममा अभिनय गरेको पनि देख्न सकिन्छ?
मलाई म्युजिक भिडियो खेल्न मनपर्छ। मुख्य कुरा आफ्नो पेसाभन्दा बाहिर समय कत्तिको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यसमा भर पर्छ। मौका मिल्यो भने फिल्म खेल्न मन पनि छ तर नायक भएर होइन खलनायक भएर। धेरैलाई नायक मनपर्छन् तर खलनायकको पनि फिल्ममा उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। उनीहरुबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। किनकी नायक भन्दा बलियो पात्र खलनायकको हुन्छ। भविष्यमा राम्रो स्क्रिप्ट आयो भने खलनायक बनेर आफ्नो भूमिका निभाउन मन छ। मलाई बलियो पात्रको भूमिका निभाउन मन छ।
कुन अभिनेत्री सँग अभिनय गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ?
(हाँस्दै) ठ्याक्कै कसरी भनौँ। सायद प्रियंका कार्की।